Maitiro ekuisa uye kuwana Mycroft inoshanda paRaspberry Pi | Mahara emahara
Maitiro ekuisa uye kutora Mycroft kushanda paRaspberry Pi
Zvinotaridza kuti munhu wese anoda kuve nemubatsiri pamba. Chishandiso chinokubatsira iwe kwete chete kuisa pamushure mimhanzi, asi iwe unogona zvakare kuchengetera matikiti ekuratidzira kana kungo dzima mwenje mumba neine chete izwi rairo.
Google, Amazon, Samsung, IBM, Microsoft, ndeimwe yemienzaniso yemakambani akavhura mubatsiri, asi vese vane huipi hwekuenderana nekambani hombe. Asi havazi vese vakadaro, Iko kune Mycroft, chaiye mubatsiri uyo akaberekerwa Gnu / Linux uye kuti inogona kushanda paRaspberry Pi, iri nyore uye yakachipa kuwana.
Kutanga isu tinofanirwa kuwana zvese zvakakosha zvinhu zvinova zvinotevera:
Vatauri ve USB
Kana tiine izvi, tisati tavhura chero chinhu, isu tinofanirwa kuenda ku Mycroft yepamutemo webhusaiti. Mariri tichava nemifananidzo yakawanda yekumisikidza Raspberry Pi 3. Muchiitiko ichi isu tinosarudza iwo mufananidzo unonzi PiCroft. Ichi chifananidzo chakavakirwa Raspberry Pi 3 uye chakavakirwa paRaspbian. Kana tango dhawunirodha mufananidzo wekumisikidza, tinouisa kukadhi re microsd. Kune izvi tinogona kushandisa chero chirongwa chechinangwa ichi; Iyo inoshanda uye yemahara chirongwa cheiri basa ndiEtcher.
Kana tangova nemakadhi emicrosd akanyorwa, tinofanirwa kukwira zvese uye kubatidza Raspberry Pi. Mune ino kesi zviri nyore zvakare batanidza iyo keyboard kune ayo anogona masisitimu ayo Raspbian angatibvunza seWifi password kana kushandura zita rekushandisa nephasiwedi yemudzidzi wemidzi.
Mufananidzo watakanyora une mamwe magadzirirwo emadhirowa anozotitungamira mune ese maitiro, saka kumisikidzwa kwematauri eUSB, maikorofoni pamwe neMycroft mubatsiri ichave iri nyaya yenguva. Asi kutanga tinoda account yeMycroftAkaunti iyi inogona kuwanikwa pane yepamutemo Mycroft webhusaiti, account yemushandisi iyo inoshandiswa kuzoshandisa zvatinoda kana zvatinofarira kuburikidza negore. Mushure meizvi, isu tichaona maitiro emubatsiri akafanana naMycroft anogona kuita zvinhu zvakawanda zveimba yedu nemari shoma.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Raspberry Pi » Maitiro ekuisa uye kutora Mycroft kushanda paRaspberry Pi
Renishaw RenAM 500Q, itsva 3D purinda inoumbwa anosvika mana lasers
XYZPrinting inotiudza nezve yavo nyowani 3D purinda